Mofonaina 24 Septambra 2014
Asan’ny Apostoly 26:19-32
Tsy asa mora akory ny mitory famonjena. Asa tsy maintsy ataon’ny mino anefa izany, na ao an-katerena aza. Tsapa amin’izay nanjo an’i Paoly Apostoly eto, fa ny fitoriana ny filazantsaran’ny famonjena dia :
Asa mitaky fiaretana ny mafy : (and.21 – 24 )
I Paoly Apostoly voafonja noho ny amin’ny fampianarana momba an’i Kristy no hita eto . Mijoro eo anatrehan’ny manam-pahefana sy ny mpanjaka izy manala tsiny ny tenany nefa nambaran’ireo fa olona very saina, rehefa nilaza ny famonjena ny olona ao amin’i Kristy. Ny Jiosy aza noho ny amin’izany, efa nikendry ny hahafaty azy. I Paoly Apostoly, niaritra ny mafy indrindra teo amin’ny fitoriana ny famonjena. Tokony ho tsaroantsika Kristiana fa tsy asa mora akory ny mitory ny famonjen’ Andriamanitra ao amin’i Kristy. Miandry ao ny jaly, latsa, eso…
Asa mikendry sokajin’olona rehetra : (and.27. 28 )
Novantanin’i Paoly, fa na ny mpanjaka koa aza mino ny amin’i Kristy Jesoa, mino ny mpaminany. Hendratra Agripa mpanjaka nandre izany, fa i Paoly kosa nanohy ny teniny, fa tsy ny mpanjaka ihany fa izay rehetra mandre azy anio. Izany hoe : ny olona rehetra vory teo, nokendren’ i Paoly ho resy lahatra fa mamonjy ny olona rehetra no tian’Andriamanitra handray ny famonjeny. Asa mikendry ny sokajin’olona rehetra toy izany no nanirahan’ Andriamanitra antsika koa, ho mpitory famonjena.
Nahoana no ilazàn’ny sasany fa asa mora ny mitory ny Filazantsara ?
Catégories :	Mofon'aina	/ par AnjGab 24 septembre 2014